Inkqubo yezikhalazo zeofisi | Law & More B.V.
Law & More Ixabisa ukwaneliseka kwabaxumi bethu. Ifemu yethu izakusebenzisa ezona zilingo zilungileyo zokuba kwinkonzo yakho Nangona kunjalo inokwenzeka ukuba awonelisekanga ngomba othile weenkonzo zethu. Uya kufumana ngezantsi inyathelo onokuthi ulithabathe kwimeko enjalo.
Kwimeko apho awonelisekanga malunga nokudalwa nokwenziwa kwesivumelwano sokwabiwa, umgangatho weenkonzo zethu okanye isixa se-invoice yethu, uyacelwa ukuba ungenise izichaso zakho kuqala kwigqwetha lakho. Unganxibelelana noMnumzana TGLM Meevis wombutho wethu. Ifemu yethu iyokusingatha isikhalazo ngokuhambelana nenkqubo echazwe kwinkqubo yethu yezikhalazo yeofisi.
Siya kuthi, ngokubonisana nawe ufumane isisombululo sengxaki ephakanyiswe ngokukhawuleza. Siya kuhlala siqinisekisa isisombululo esinjalo ngokubhala. Unokulindela ukufumana impendulo yethu kwisikhalazo sakho ngokubhala kwiiveki ezi-4. Kwimeko apho kufuneka siphambuke kule kota, siza kukwazisa ngexesha kwaye siya kuthi sikhankanye isizathu sokuphambuka kunye nexesha elingalindelekanga lokuphendula kuthi.
Inqaku loku-1 Iingcaciso
Kule nkqubo yezikhalazo iimeko ezichazwe ngezantsi ziya kuba nezi ntsingiselo zilandelayo:
isikhalazo: nayiphina intetho ebhaliweyo engonelisekanga okanye egameni lomthengi ejonga igqwetha okanye umntu (umntu) osebenza phantsi koxanduva lakhe malunga nokuququnjelwa okanye ukwenziwa kwenkqubo yabathengi kwiinkonzo zobuchule (overeenkomst van opdracht), umgangatho weenkonzo ezinjalo ezibonelelweyo okanye isixa-mali esivunyiweyo seenkonzo ezinjalo, ngaphandle kwesikhalazo ngaphakathi komgaqo 4 woMthetho waseNetherlands kwiGqwetha lobuGqwetha (I-Advocatenwet);
isikhalazoUmthengi okanye ummeli wakhe, egcwalisa isikhalazo;
igosa lezikhalazo: igqwetha elinoxanduva lokujongana nesikhalazo, kuqala uMnu TGLM Meevis.
Inqaku lesi-2 Inqaku lesicelo
2.1 Le nkqubo yezikhalazo isebenza kulo lonke uthethathethwano ngeenkonzo zobungcali ezinikezelwe ngu Law & More B.V. kubaxhasi bayo.
2.2 Luxanduva lwegqwetha ngalinye Law & More B.V. Ukusingatha zonke izikhalazo ngokuhambelana nale nkqubo yezikhalazo.
Inqaku lesi-3 iinjongo
Injongo yale nkqubo yezikhalazo yile:
ukubeka phantsi inkqubo apho izikhalazo zabathengi zinokuthi zisonjululwe ngendlela ehambelana nesisombululo nangexesha elifanelekileyo;
ukubeka inkqubo yokusekwa kwesizathu (s) sesizathu sesikhalazo somthengi;
ukugcina kunye nokuphucula ubudlelwane babathengi ngokuphatha izikhalazo ngendlela efanelekileyo;
ukukhuthaza impendulo kuso nasiphi na isikhalazo ngendlela egxile kubathengi;
ukuphucula umgangatho weenkonzo ngokusombulula nokuphicotha izikhalazo.
Inqaku lesi-4 Ulwazi ekuqalisweni kweenkonzo
4.1 Le nkqubo yezikhalazo yenziwe yaziwa eluntwini. Kuyo nayiphi na ileta yokubandakanyeka nomthengi, umxhasi uya kwaziswa ukuba kukho inkqubo yezikhalazo ekhoyo, kwaye le nkqubo iya kusebenza kwiinkonzo ezibonelelweyo.
4.2 Imigaqo esemgangathweni yokuzibandakanya (ngokwemiqathango kunye neemeko) lusebenza kulo naluphi na uthethathethwano lomthengi (ekwabhekiswa kuyo nayiphi na ileta yokuzibandakanya nomthengi) uya kuchonga umntu ozimeleyo okanye ilungu apho isikhalazo esingasonjululwanga ngokuhambelana nale nkqubo yezikhalazo singangeniswa ukuze sifumane. isigqibo esibophayo.
4.3 Izikhalazo ngokwentsingiselo yenqaku loku-1 lale nkqubo yezikhalazo ezingasonjululwanga emva kokuba ziphathwe ngokungqinelana nale nkqubo yezikhalazo zingangeniswa kwiKomiti yeeNgxwabangxwaba.IGeschillencommissie Advocatuur).
Inqaku lesi-5 Inkqubo yezikhalazo zangaphakathi
5.1 Ukuba umxhasi uyeza e-ofisini ekhalaza malunga nemiyalelo ayinikiweyo Law & More B.V.Isikhalazo siya kuthunyelwa kwigosa lezikhalazo.
5.2 Igosa lezikhalazo liya kwazisa umntu ekwenziwe kuye isimangalo malunga nokufakwa kwesikhalazo kwaye liza kunika umfaki-sikhalazo nomntu lowo isikhalazo anikwe yena ithuba lokuchaza isikhalazo.
5.3 Umntu ekubhekiswe kuye isikhalazo uyakuzama ukusombulula umba kunye nomxumi ofanelekileyo, nokuba kungenjalo kungenjalo kungenelela kwigosa lezikhalazo.
5.4 Igosa lezikhalazo liyakusombulula isikhalazo kwiveki ezine emva kokufumana isikhalazo, okanye lazise umkhalazi, lichaze izizathu zokuphambuka kweli xesha, libonakalise ixesha apho uluvo ngesikhalazo luyakunikezelwa khona.
5.5 Igosa lezikhalazo liya kuthi lazise ummangali kunye nomntu ekwenziwe ngaye isimangalo ngokubhaliweyo malunga noluvo malunga nokufaneleka kwesikhalazo, nokuba okanye hayi kunye nezindululo.
5.6 Ukuba isikhalazo besiphathwe ngendlela eyonelisayo, umkhalazi, igosa lezikhalazo kunye nomntu ekwenziwe kuye isikhalazo bayakusayina uluvo ngokufaneleka kwesikhalazo.
Inqaku lesi-6 Imfihlo kunye nokusingathwa kwezikhalazo kusimahla
6.1 Igosa lezikhalazo nomntu ekubhekiswe kuye isikhalazo baya kugcina imfihlo ngokubhekisele ekusetyenzisweni kwesikhalazo.
6.2 Umkhalazi akazukuhlawulwa nayiphina inkcitho ngokubhekiselele kwiindleko zokusingathwa kwesikhalazo eso.
Inqaku lesixhenxe uXanduva
7.1 Igosa lezikhalazo liya kuba noxanduva lokusingatha isikhalazo kwangexesha.
7.2 Umntu ekubhekiswe kuye isikhalazo uyakuhlala elazisa igosa lezikhalazo ngalo naluphi na unxibelelwano nommangali nangesisombululo esisebenzayo.
7.3 Igosa lesikhalazo liya kugcina umkhalazi esazi malunga nokuphathwa kwesikhalazo.
7.4 Igosa lesikhalazo liya kuqinisekisa ukuba ifayili yesikhalazo iyagcinwa.
Inqaku lesi-8 ukubhaliswa kwezikhalazo
8.1 Igosa lezikhalazo liya kubhalisa isikhalazo, lichonge isihloko sesikhalazo.
8.2 Isikhalazo sinokuhlulwa kwizihloko ezahlukileyo.
8.3 Igosa lezikhalazo liya kuthi ngamaxesha athile linike ingxelo ngokusingathwa kwazo naziphi na izikhalazo kwaye lenze izindululo ukwenzela ukuthintela ukuvela kwezikhalazo ezitsha kunye nokuphucula iinkqubo.
8.4 Nayiphi na ingxelo kunye neengcebiso ziya kuxoxwa kwaye zingeniswe xa kuthathwa izigqibo kube kanye ngonyaka.